AMANANI okudla asalokhu ekhuphuka njengoba ngoNovemba ebewuR4 018,22 esuka kuR3 916, 72 ngo-Okthoba, nokusho ukunyuka ngo-2.6%. Ezinyangeni ezintathu ezidlule ukudla kunyuke ngo-4.2%. Loku kuvezwe wumbiko wocwaningo wePietermaritzburg Economic Justice & Dignity Group nolugxile ekulandeleni ukuthi amanani okudla abiza malini, ikakhulukazi uhlobo lokudla oluthengwa ngabantu abahola kancane nabaphila ngezibonelelo zikahulumeni. Lolu cwaningo olwenziwa ezitolo zokudla eziwu-44 nasemabhusha awu-30 lwenziwa KwaZulu-Natal, eGauteng, eNorthern Cape naseNtshonalanga Kapa. | Umbele
Ulwenza kanjani ucwaningo lwemakethe ofisa ukungena kuyona?, kuloba uNtokozo Biyela
Okhuthazwa wuthando lokunakekela abantu unebhizinisi lokusiza abantu bathole imisebenzi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA